Unibet France ego : 100 euro nke nza n'efu akwụghị ụgwọ maka ndebanye aha na Unibet.fr
Unibet.fr bụ otu n'ime saịtị ịkụ nzọ egwuregwu mbụ nke kere ụwa. E hiwere ụlọ ọrụ ahụ 1997 ma akpọrọ nzọ bet M. bulie 2005 mgbe aha Unibet. Saịtị a dị na ahịa French kemgbe 2011 mgbe ọ sonyechara Bet Eurosport. unibet Group Plc nwere ọtụtụ nde ndị egwuregwu n'ụwa niile na edepụtara na Stockholm Stock Exchange. Yabụ, ọ bụ saịtị ịkụ nzọ siri ike na-agbanyeghị aha mmefu ego ya na mgbasa ozi nke saịtị dị ka PMU. France Unibet poker na-enye, na otutu ahihia na egwuregwu nke igba na ego nke 100 euro. Dị ka ọtụtụ egwuregwu Unibet egwuregwu ga-akwụghachi nzọ mbụ gị ruo 100 € ma ọ bụrụ na ọ tụfuru. Gaa Leta faịlụ anyị maka ihe ndị ọzọ
Unibet mepere na France na Jenụwarị 2012, ekele maka mgbapụta Eurosportbet ma si otu a nwetaghachi egwuregwu egwuregwu ARJEL na akwụkwọ ikike poker. Ọpụpụ na njedebe nke Unibet.fr anaghị emerụ saịtị a na-eduga n'ịgba chaa chaa n'ịntanetị, nke nwere ezigbo udi ihe osise na France, ekele maka njikọta nke onye nta akụkọ egwuregwu Pierre Ménès.
Njirimara nke saịtị French karịa, ịbanye na menu ịkụ nzọ na ndepụta ịkụ nzọ dị ka mma karịa nke a hụrụ na ụdị Bekee. paris emepekwala saịtị na mkpanaka yana ngwa bara uru maka mgbe ịkụ nzọ dị na ya.
Unibet France : Ọtụtụ egwuregwu maka ịgba ama egwuregwu gị
Unibet anaghị enye nhọrọ egwuregwu sara mbara nwere ike ịme Bwin France, mana karịa 15 ọzụzụ ọzụzụ chọrọ. Anyị laghachiri na bọọlụ Unibet.fr kpochapụwo, bọọlụ, tenis na rugby, mana inwere ike ịkụ nzọ na ịkụ ọkpọ ma ọ bụ bọọlụ american. Chọta egwuregwu niile dị na http://www.unibet.fr/sport.
Dị ka ọtụtụ saịtị saịtị ịkụ nzọ dị n'ịntanetị, ị nwere ike nzọ ọtụtụ ọdịiche na otu nzukọ ọ bụla: a mmeri kpochapụwo / ida na nzo osisi ndi di ka “willnye ga-anata kaadi mbu n’egwuregwu. »Ọzọkwa, ndị France na-enye n'usoro nke Unibet paris ndụ nke ya na ndị asọmpi ya. Kwa izu, ị nwere ike ịkụ nzọ dị ndụ na ama egwuregwu bọọlụ kachasị ama, tenis, rugby ma ọ bụ basketball.
Na-enye n'ụzọ zuru ezu
Paris na-enye ihe egwuregwu egwuregwu doro anya (kamakwa ahihia na poker). Fọrọ nke nta egwuregwu niile. N'ozuzu, nye mkpuchi karịa 30 Unibet na-enye ọzụzụ ma na-enye gị ohere ibu amụma banyere asọmpi egwuregwu ndị kachasị ewu ewu na Liga, Njikọ 1 Njikọ Champions, Njikọ Njikọ, yana nzuko nke nwere ala di ala.
Mana agafee ogo mmega ahụ, ọ bụ nso nke nzo kwa egwuregwu na-atọ ụtọ. Paris n'etiti kpochapụwo na ndị kasị ewu ewu, a ga-emebi gị ka ọ họrọ.
Ọkacha mma, pụrụ iche nke nzọ a ga-enye otutu uzo kacha mma maka ịkụ nzọ dị ndụ (ndụ ịkụ nzọ). Yabụ, ịgba ọsọ na-egwu ọtụtụ egwuregwu otu mgbe ihe na-atọ ụtọ.
Ensuite, ọ na-enye ohere na-atọ ụtọ, ha na-adaba nwayọ na asọmpi ahụ. Agbanyeghị, anyị nwetara ọkwa dị mma, tumadi na football. Ntucha maka ịkụ nzọ na akara kachasị dị irè. Ọzọkwa, A na-ahụta nzọ ahụ site na ntinye ya Mutifax na-enye ohere nke ijikọta ọtụtụ nzo iji nweta uru site na nyocha a na-eme ka ọwanyewanye.
€ 100 daashi
Nkwalite a, N'ezie, obere ọnyà. Saịtị ahụ na-enye ihe ruru 100 € free nzọ nke nzọ mbụ, merie ma ọ bụ tufuo.
Dika o siri di mma ịnwe ego nke abughi nani imeghachite prognosis ojoo, mana eziokwu ahụ bụ na ego mebere ego bụ ntakịrị ihe mgbagwoju anya. Nke a bụ otú ọ na-aga:
You ga-enweta akwụmụgwọ n'ụdị nzi ego n'efu 50% nke nkwụnye ego mbụ gị, mgbe nke ahụ gasịchara na akaụntụ player gị ka akwadoro.
ọnaghị ego ọnụọgụ Paris enweghị ike ịdọrọ ya. Ekwesịrị igwu ya na uru ụgbụ (ọ bụrụ na ọdabara) ga-anakwere na ezigbo ego ego gị. Anyị kwesịrị iche echiche banyere iji otuto a, mana na ihu ọma na ọ dịghị oge mmebi.
Ọzọkwa, otutu n'ime nkwalite ndị a mgbe ndị otu na-enyocha ya mgbe niile iji na-elekọta ndị ahịa Unibet.fr France, nke amarala ebe saịtị ịgba ama maka ohere dị mma na ịdị mfe nke ị nwere ike itinye nzọ.
a na-ekwe nkwa nchekwa azụmahịa na Unibet, ị na-enwetakwa mgbanwe dị mma maka ịnabata ụzọ ịkwụ ụgwọ dị iche iche. Depositnye ego na akaụntụ gị, ị nwere ike họrọ iji kaadị akwụmụgwọ Visa ma ọ bụ MasterCard, akwugo ugwo (PaySafeCard, Ahịa tiketi maka…), kamakwa iji gaa n'ihu site na obere akpa elektrọnik dịka PayPal ma ọ bụ Moneybookers. N'ọnọdụ ọ bụla, Enweghị ụgwọ ebubo kwa nzọ na opekempe nkwụnye ego bụ otu n'ime ndị kachasị ala na ahịa.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ise ma ọ bụ nweta itule, na-enye ọrụ naanị site na mbufe akụ, nke na-amachi oke. Agbanyeghị, Enweghị ụgwọ ụgwọ ọzọ akwụ ụgwọ ọzọ.
Previous Previous post: PMU daashi
Next Next post: Unibet Unebet